Ihe akaebe na-egosi mmekọrịta dị n'etiti SERP ọkwa na onye nnabata web | Martech Zone
Ihe Akaebe na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti SERP Ranking na Web Host
Fraịde, Ọktọba 4, 2013 Larry Alton
Na ngwụcha August, Matt Cutts kọwara na Google na-elele ọsọ ọsọ saịtị dị ka ihe dị na ebe nrụọrụ weebụ na-egosi na peeji nsonaazụ ọchụchọ. Na nke ya Webmaster Enyemaka vidiyo, O kwuru, sị: “Ọ bụrụ na saịtị gị dị ezigbo, ọ naghị egbu oge, anyị ekwuola na anyị na-eji ọsọ ọsọ na ogo ogo anyị. Yabụ na ihe niile hà nhata, ee, saịtị nwere ike ịdị ala.
“Ugbu a, anyị na-agaghị na-ekwu okwu banyere ihe na okwu nke dị ka onye zuru ọnụ ọgụgụ nke sekọnd n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ dị iche iche na akụkụ dị iche iche nke ụwa, na e nwere ihe dị iche bandwit na gbapụrụ ọsọ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
“Agbanyeghị, ọ bụ ụzọ dị mma iji chee banyere ya iji kwuo, ọ dị mma, lelee agbata obi gị nke weebụsaịtị. Lee anya na saịtị ndị a na - esoro gị, mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ị karịrị. Ọ bụrụ na ị nọ n'isi njedebe n'ihi na saịtị gị dị n'ezie, na-adịghị nwayọ ala, ee, ọ nwere ike bụrụ na saịtị gị ga-agbadata ala n'ihi ọsọ ọ na-agba. ”
Mmetụta nke oge nbudata
Ogologo oge ibu ihe bụ ihe ndị ọkachamara na-ejighị arụ ọrụ na-arụ ụka mgbe niile, ebe ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ jikọtara peeji nke ụlọ ha na edemede, onyonyo, na ọdịnaya ndị ọzọ mere ka ndị ọbịa nọdụ na-echere ihe ha ga-ebu.
Ebumnuche bụ iji hụ na ahụmịhe onye ọrụ ka mma, mana nke a ejidighi na mkpokọta nke ndị na-emepụta weebụ na ndị nwe saịtị. Ọtụtụ chere na nhọrọ nke ịchụpụ ihe ndị ọzọ "dị jụụ" dị mkpa karịa izere iwe ndị ọrụ.
Arụmụka ahụ na-amasị ndị na-azụ ahịa
Ma na Google na-ewe oge ọ na-ewe saịtị iji tinye na ihe nchọgharị ndị ọbịa ihe dị mkpa na ọkwa saịtị ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahụrịrị na ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ihe dị mkpa. Oge ngwa ngwa peeji na-amalitekarị site n'aka ndị na-eweta saịtị ahụ.
Imirikiti ndị na-eweta Bochum na-ekekọrịta sava n'etiti ọtụtụ ndị ahịa ha. Ka a na-anabata weebụsaịtị ndị a na-akwado na ihe nkesa dị iche, a na-eji ihe onwunwe zuru oke na oge ibu ahụhụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eweta Bochum ga-akwaga saịtị ndị ahịa na sava dị iche ma ọ bụrụ na ndị ahịa rịọrọ ya, nhọrọ ndị ọzọ dị ka raara onwe ya nye ma ọ bụ sava nzuzo nke onwe ga-enyere aka belata oge ibu peeji. Nsogbu bụ, ọ bụghị ndị na-eweta nnabata niile nwere ihe ndị a dịka nhọrọ; ma na -emekarị, atụmatụ Bochum efu ma ọ bụ n'efu anaghị enwe ha.
Karịa naanị ibu oge
Oge ibu peeji na-ekere òkè dị mkpa na ogo saịtị. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị otu agbanwe agbanwe nke web host nwere ike imetụta. Nchedo, oge nkwụsị / nkwụsị, na ọnọdụ nwekwara ike ịrụ nnukwu ọrụ na etu igwe ọchụchọ si enyocha ibe weebụ.
Onweghi onye choro ka ewepu saiti ya na Google, ma obu ihe nyocha ndi ozo, n'ihi na o na eme ndi oru malware. Ma otu akụkọ sitere na WhiteHat Security na-egosi na pasent 86 nke weebụsaịtị niile nwere ma ọ dịkarịa ala otu nsogbu nke nwere ike ikwe ka hacker bulite koodu ọjọọ na saịtị ahụ.
Abụọ n'ime ndị ọzọ enwekarị nsogbu nwere njikọ chiri anya na web host: FTP ọma na njikwa nkesa ihe ndapụta.
Oge ezumike / Downtime
Ọ bụrụ na ndị ọbịa enweghị ike ịnweta weebụsaịtị n'ihi na ihe nkesa dị ala, mgbe ahụ, ududo na-enweghị ike ịchọta ya. E kwesịghị ịtụle ndị na-akwado websaịtị na-anaghị anọdụ na nkwenye oge 99.9 rue oge n'ihi mmetụta ọjọọ nke a nwere ike inwe na saịtị SEO.
Companlọ ọrụ ndị dị na United States ga-ebuli elu karịa nyocha ndị mmadụ mere na United States - ọ bụrụ na saịtị ahụ kwadoro na United States. N'otu aka ahụ, azụmaahịa dị na mba ndị ọzọ ma ọ bụ mpaghara mpaghara kwesịrị ịhọrọ atụmatụ Bochum nke dị nso, n'ihi na nyocha sitere na mpaghara ahụ ga-ebuli saịtị ndị dị elu elu ma baa uru.
N'ezie, ịhọrọ ezigbo nnabata apụtaghị ihe ọ bụla maka SEO ma ọ bụrụ na eleghara ọdịnaya na ogo ogo ndị ọzọ anya; mana maka ụlọ ọrụ na-ewe akụkụ ọ bụla nke nyocha ọchụchọ ha nke ọma na ezigbo onye ọbịa nwere ike inye ha ọnụ ha chọrọ.
Larry bụ onye ndụmọdụ azụmaahịa nọọrọ onwe ya ọkachamara na usoro mgbasa ozi mmekọrịta, azụmahịa, na azụmaahịa ya. Soro ya na Twitter na LinkedIn.
Ihe ngosi: Mkpokọta Mmekọrịta, Nhazi ihu igwe, Njikere Ahụmịhe Onye Ọrụ
Ọkt 4, 2013 na 10:24 AM
Ihe na-adọrọ mmasị, aga m elebara nke a anya na atụmatụ nke weebụsaịtị m!